‘ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे धितोपत्र बोर्डले छलफल गरिरहेको छ’ (निरज गिरीसँगको अन्तरवार्ता) ~ Banking Khabar
‘ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे धितोपत्र बोर्डले छलफल गरिरहेको छ’ (निरज गिरीसँगको अन्तरवार्ता)
पछिल्लो समय पुँजी बजारमा आम नागरिकको चासो बढ्नुका साथै पुँजीबजारको दायरा पनि विस्तार भएको छ । बजारमा दिनैपिच्छे नयाँ नयाँ व्यक्तिको आगमन भएको छ भने पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । सन्सारमै कतिपय व्यक्ति सेयरबजारबाट धनाड्य बन्ने गरेको र कतिपय व्यक्ति भने यही बजारबाट कम्जोर समेत बन्ने गरेका छन् । लगानीकर्ता पुँजी बजारमा आर्कषित भइरहेको सन्दर्भमा दैनिक कारोबार समेत बढ्ने गरेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालको समग्र पुँजीबजारका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीसँग बैंकिङ खबरका लागि आकास बोगटीले गरेको कुराकानीः
नेपालमा पुँजी बजारको अहिलेको अवस्थामा कुन धरातलमा देख्नुुहुन्छ ?
धितोपत्र बोर्डको स्थापनाको २८ वर्ष भएको छ । पछिल्लो चार पाँच वर्षको मार्केट विस्तारलाई हेर्दा पोजेटिभ तवरबाट बजार बढिरहेको छ । दोस्रो बजारको इन्डेक्स कहिले माथि जान्छ त, कहिले तल झर्छ । अहिले प्राथमिक बजारको विस्तारले गर्दा ७७ वटै जिल्लाबाट सेयर भर्न मिल्छ । अहिले पोलेसिगत रुपमा पनि सबैलाई सेयर पर्ने गरी बाढ्नु पर्छ भन्ने कुराले बजारको विस्तार भएको हो । बजार विस्तार भएन भने बजार काठमाडौं केन्द्रिकृत हुन्छ । बजार काठमाडौं केन्द्रिकृत भयो भने यसले कसैलाई फाइदा गर्दन । त्यसैले विगत चार पाँच वर्षमा बोर्ड लगायत स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस मर्चेन्ट बैंक, ब्रोकर कमिनिटिको अथक प्रयासले गर्दा बजार विस्तार भएर गएको छ ।
पछिल्लो समयमा पुँजी बजारको दायर बढेर गएको छ, किन यसरी बढेर गएको होला ?
अहिले लगानीकर्ताले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न थालेका छन् । पहिले टेक्नोलोजीको प्रयोग हुँदैनथ्यो । जसले गर्दा अहिले सेयरमा लगानी गर्न सहजीकरण भएको छ । अहिलेको अवस्थामा प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारमा टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन थालेसँगै कारोबार बढ्न गएको हो । अहिलेको अवस्थामा दैनिक करिब ९० प्रतिशत सेयर कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ । यसरी देशव्यापी रुपमा बजारको विस्तार भएर गएको अवस्थाले पुँजीबजारको दायरा बढेर गएको हो ।
सेयर कारोबार डिजिटल सिष्टममा प्रवेश गरेको छ, तर पनि सेयर भर्न बैंक वित्तमा पनि लामो लाइन लाग्ने जमात त त्यतिकै छ नि ।
मुख्यतया टेक्नोलोजीको बारेमा मानिस अभ्यस्त हुन नसकेको पनि हो । मानिसमा कन्फिडेन्ट विल्ड हुन सकेको छैन । अनलाइनबाट सेयर भर्नेदेखि अन्य सेटलमेन्टको काममा सिडिएसले दिएको टेक्नोलोजीमा अपग्रेडसनको आवश्यकता भएको छ । बजारमा पुरानो टेक्नोलोजीबाट काम भइरहेको छ । पहिले बजारको विस्तार भिज्वलाइज गरिएको थिएन ।
जसकारण कहिलेकाहि सिष्टमले काम नगरेको अवस्था हो भने, अहिले टेक्नोलोजीमा अपग्रेडसनका लागि कसरी सिष्टमलाई स्मूथ गर्न सकिन्छ भन्दै काम भइरहेका छ । तत्कालै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बन्द हुँदा १० लाख ४४ हजार बढि आवेदन पर्याे । पहिले स्टिम डिजाइन गर्र्दा यति धेरै आवेदन पर्छ भनेर भिज्वलाइज गरिएको थिएन । अहिले १० लाख बढि आवेदन पर्न थालेको छ, यो भोलि बढेर २० लाख पुग्ला त्यसको लागि अब स्टिम अपग्रेड गर्ने समय भएको छ ।
डिजिटल सिष्टमबाट पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई के कस्ता टिप्स दिनुहुन्छ ?
मुख्यतया डिजिटलाइजेसनले सहजीकरण गर्छ । तर, डिजिटलाइजेसनमा जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले यसमा अलिकति अपडेटेड हुनु आवश्यक छ । डिजिटलमा प्रवेश गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले बैंकमा खाता खोल्नु पर्दछ । त्यसपछि डिम्याट खाता खोल्ने, डिम्याट खाता खोलिसकेपछि ब्रोकरमा गएर ट्रडिङ खाता खोल्नु पर्दछ । त्यसछि सजिलै घरमा बसेर कारोबार गर्न सकिन्छ ।
तपाईको बिचारमा पुँजी बजारमा आइरहने र आउन सक्ने रिक्स के के हुन् ?
पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नै प्रतिफल पाउनको लागि हो । त्यसैले पुँजी बजार लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिम मुक्त हुदैन यसर्थ यो जोखिम युक्त हुन्छ । पुँजी बजारमा लगानी गर्दा रिक्स हुन्छ । त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताको सेयर बजारमा लगानी गर्दा आफुले लगानी गर्न लागेको कम्पनीको बारेमा अध्यन गरी जानकारी राखेर लगानी गर्नुु पर्दछ । यदि लगानीकर्ताले प्राथमिक बजार आईपीओमा लगानी गर्न खोजेको हो भने आईपीओ भर्न लागेको कम्पनीको संचालक को को छन् ? पहिलेको ट्रयाक रेकर्ड के छ ? जस्तै हाइड्रोमा लगानी गर्ने हो भने अन्य हाइड्रो कम्पनीको पफमेन्स कस्तो छ ? मुख्यतया लगानीकर्ताले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै, दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने हो भने आफुले लगानी गर्न लागेको कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्नु पर्दछ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्दा प्रोफिट एण्ड लस हेर्नु पर्दछ । कम्पनीले के कति नाफा कमाएको छ र कम्पनीले लाभांश बाढेको छ कि छैन् कम्पनीको संचालक को को छन् ? सिईयो को छ ? लगानीकर्ताले यस्ता कुरामा ध्यान दिएर लगानी गर्याे भने प्रतिफल पाउन सकिन्छ । नेपालमा स साना पुँजीकर्ताको बाहुल्यता धेरै छ ।
त्यसैले यसमा धेरै हल्ला आउछ, हल्ला आयो भन्दैमा लगानीकर्ताले हल्लाको पछाडि लाग्नु हुदैन । सामान्यतया मानिस बजारमा सामान खरिद गर्न जाँदा त धेरै ठाँउमा सोधेर बुझेर मात्र सामान खरिद गर्न खोज्दछन् भने सेयर बजारमा त पैशा लगानी गर्ने हो । त्यसैले सेयर बजारमा लगानी गर्दा समय दिएर कम्पनीको बारेमा अध्यन गरेर लगानी गर्न जरुरी हुन्छ । यदि कसैलाई समय छैन अध्यन गर्न गाह्रो हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न पोर्टफोलियो छन् जसमा ३ लाखसम्मको लगानीमा लगानी व्यवस्थापन लगानी गरिदिने गर्दछ । त्यस्तै म्यूचल फन्डहरु छन् त्यसमा लगानी गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले जाखिम बहन गर्न सक्ने गरी दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै धेरै जोखिम लिन नचाहनेहरुको लागि लगानी व्यवस्थापक वा सामूहिक लगानी कोषमा गएर लगानी गर्न सकिन्छ ।
लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्याे भन्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ, यसको लागि बोर्डले के सोचेको छ ?
पूर्व अर्थमन्त्रीले एउटा समिति बनाउनु भएको थियो । जसमा ५८ बँुदा समेटिएका थिए । उक्त ५८ बुँदा मध्येको १ बुँदामा ब्रोकर कमिसन रिभ्यु गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । तर, त्यसमा कुन बेला रिभ्यु गर्न सकिनेछ भन्ने कुरामा जब कारोबार फुल्ली अनलाइन फङसनल हुन्छ त्यसपछि रिभ्यु गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । त्यसकारण अहिले करिब ९० प्रतिशत अनलाइनबाट कारोबार भइरहेको छ जसले गर्दा ब्रोकर म्यान्युल वर्क घटेर गएको छ । अहिले बजारमा कारोबार बढेर गएको अवस्था छ । पहिलेको तुलनामा दैनिक एक दुई अर्ब कारोबार भइरहेको बजारमा अहिले दैनिक औषतमा ६ अर्ब बढिको पुँजी बजारमा कारोबार भइरहेको अवस्था छ । बजार बढ्दै जादा कष्ट अफ डुइङ घटाउदै जानु पर्दछ । यसको लागि धितोपत्र बोर्डले विभिन्न पक्षसँग अहिलेको अवस्थामा ब्रोकर कमिसन कति राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनी अध्यन छलफल गरिरहेको छ । यसले चाडैनै टुङगोमा पुर्याउने बोर्डले विश्वास गरेको छ ।
पुँजी बजारमा वित्तीय साक्षरताको पहुँच विकासको लागि बोर्डले के कस्ता कार्यक्रम संचालन गरेको छ ?
बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको थियो । वित्तीय साक्षरताको विस्तारको लागि बोर्ड लगायत नेप्से, सिडिएस, मर्चेन्ट बैंक लगायत ब्रोक्रर कमिनिटि सहकाईमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । जति लगानीकर्ता वित्तीय रुपमा साक्षर हुन्छन् त्यती नै मार्केटको विस्तार हुन्छ । जसकारण बोर्डले वित्तीय साक्षरताको लागि निरन्तर कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।
प्राथमिक बजार आईपीओमा लगानी गर्दा के कत्तिको रिक्स हुन्छ ?
प्राथमिक बजार आईपीओ लगानी गर्दा पनि धेरै कुरामा लगानीकर्ता ध्यान दिनुपर्दछ । जस्तै आफुले लगानी गर्न लागेको कम्पनीको संचालक देखि पास्ट पर्फमेन्स र भविष्यको रणनीति के कस्ता छन् यी कुरामा ध्यान दिएर लगानी गर्नु पर्दछ । १ सय रुपैयाँमा किनेको आईपीओ मुल्य घटेर चालिस पचास रुपैयाँसम्म पुगेका छन् । त्यसैले आईपीओमा पनि रिक्स छ तर पनि आईपीओ खरिद गर्दा अध्यन विश्लेषण गरी लगानी गर्दा प्रतिफल अवश्य पाइन्छ ।
पुँजी बजार विस्तारको लागि बोर्डले के कस्ता रणनीति तय गरेको छ ?
पुँजी बजार विस्तारको लागि बोर्डले ४ वर्षे रणनीति तय गरेको छ । अबको समयमा पुँजी बजारलाई कता लैजाने भन्नेमा मुख्यतया कानुनी सुधार, धितोपत्र व्यवसायीको क्यापासिटि देखि मार्केट विस्तार, नयाँ इन्सुमेन्ट भित्राउने लगायतका काममा बोर्ड लागिपरेको छ ।